I-Magnesium chloride, ikhambi lezimangaliso elaziwa kancane - i-Afrikhepri Fondation
NgoLwesihlanu, Septhemba 17, 2021
Funda: 8 amaminithi
An ngekhulu le-19, lapho ukudla kwethu kwakulinganiselwe futhi kungakabi namandla kwezolimo zezimboni, ukuntuleka kwe-magnesium kwakungekho. Kwakwanele ukudla i-500gr yesinkwa senhlama yomuncu ophelele oletha nsuku zonke umnikelo odingekayo. Isinkwa esisidlayo namuhla sihlinzeka ngamanani amancane aso. IMagnesium ayisiwo umuthi, iwukudla okudingekile impela ngoba ukungabikho kwayo ngokuphelele akuhambisani nempilo. Kuyadingeka kuzo zonke izinqubo zamakhemikhali emzimbeni wakho, ukwakheka komzimba, ukuhlanganiswa kwama-nucleic acid namaprotheni, kanye nemisebenzi eminingi yomzimba wethu, njengokukhiqizwa kwamaseli, ukukhiqizwa kwamandla, ukudluliswa kwemizwa uvalo. Kulokhu kokugcina, i-magnesium eboshwe ngokujulile ku-calcium ngoba iqinisekisa ukufakwa kwayo, ingesinye sezakhi zomzimba eziyinhloko zeseli lezinzwa; kuzo zonke izinkinga zesistimu yezinzwa (uvalo, ukudangala, ukuqwasha, ukukhathazeka…) kukhona ukuntuleka kwe-magnesium. Umcwaningi waseFrance u-ROBINET ukhombisile ukuthi eFrance, ukuntuleka kwenhlabathi ye-magnesium kwaphakanyiswa kakhulu ebalazweni laseFrance lokuzibulala. Ngakho-ke iMagnesium iyisidambisi esinamandla sokucindezelwa okufanele sithokozelwe izidakamizwa ezithile ezinemiphumela emibi kakhulu. Kwezinye izimo, indima ye-magnesium ngaphezu kwe-calcium iyathakazelisa ngezindlela eziningi. Sesivele siyazi ukuthi yi-magnesium elungisa i-calcium futhi ibandakanyeka ku-calcium metabolism ezinhlakeni ze-parathyroid. Ezingeni lamaselula, lilawula futhi lilawule ukungena kwe-calcium esitokisini nakuketshezi lwe-intracellular.
Kuthengiswa emakhemisi (ngaphandle kwemithi kadokotela) noma ezitolo zokudla zezempilo, kuma-20g sachets ahlanjululwa kwilitha elilodwa lamanzi.
Kunconywa ukuyigcina efrijini ukubulala ukunambitheka okuncane okubabayo nokubabayo.
Manje sekuqinisekisiwe ukuthi i-magnesium ikhona kuzo zonke izicubu nezitho, ukuthi ibamba iqhaza ekusebenzeni kahle kwayo yonke imisebenzi emikhulu yomzimba ngaphandle kokukhetha. Njengoba umzimba ungenayo i-magnesium reserve, udinga ukwenziwa nsuku zonke ukuhlangabezana nezidingo zomzimba, ukwehluleka ukuthi yikuphi ukuphazamiseka okuzokwenzeka ngokushesha okuncane ezingeni lalolo hlobo noma lomsebenzi onjalo ngokuya ngobucayi. ngayinye.
I-malabsorption ye-Magnesesi ihlotshaniswa nezinkinga zamathumbu.
Ukungasebenzi kahle okungapheli kungaveza umonakalo wesikhathi eside futhi kungabulala.
I-99% yamadoda ayilutho ku-magnesium (ezweni lanamuhla).
Izinkinga ngenxa yokuntuleka kwe-magnesium
Ukukhathala okungapheli kanye nanoma ikuphi ukungabi namandla, ukusabela ngokomzwelo, ukudangala, ukusebenza kwengqondo, umfutho osheshayo, ukudideka, intukuthelo, ukwethuka, ukucasuka, ukungakwazi ukucabanga kahle, ukuqwasha, ukuphazamiseka kwemisipha, ukuthuthumela, ukudlikizela, ukuzwela ngokweqile ebuhlungwini, izinkinga imithambo, ukuqina kwemithambo yegazi, isifo samathambo, isifo senhliziyo, i-fibromyalgia, i-spasm ye-vascular, i-spasmophilia, i-palpitations, i-cramp.
Kubonakele ukuthi ukutholwa kwe-magnesium chloride kunomphumela omuhle kakhulu ku:
Ukukhathazeka kanye nodwendwe lwayo lwezimpawu ezisebenza njalo: ukuzwa kwesigaxa emphinjeni, ukuzwa kwesifuba, ukushaya kwenhliziyo, ukuphazamiseka kokulala, i-hyperemotivity, njll.
Ubuhlungu obuhlukahlukene ngaphandle kokuchaza okuphilayo noma okusebenzayo, okuvame ukuholela enhlokweni yekhanda noma e-migraines, ubuhlungu be-vertebral, ubuhlungu obungasetshenziselwa ukuhlukunyezwa kanye nobuhlungu obuhlangene.
I-asthenia yasekuseni: lokhu kukhathala okuvela ekuphumeni kwelanga kuyisibonakaliso esiveza njalo.
Izifo ezahlukahlukene: ikhiqiza i-antibody engaqondile, i-efaneledin (i-magnesium protide) eyi-bactericide enamandla amakhulu (imiphumela iyamangaza).
I-Neuromuscular hyperexcitability, kufaka phakathi iziphazamiso ezingasakwazi ukulawulwa emasongweni, ama-muscle cramps.
I-arteriosclerosis nomfutho wegazi ophakeme: ibhubhisa ama-lipid ngokweqile ngumphumela wokukhipha amandla emzimbeni.
Amazwe okwethuka (nokuphazamiseka kokusebenza): kuvimbela ukuhlukana kwe-metabolism nokubuyiselwa.
hyperthyroid: iyisilawuli esinamandla.
yamathambo: yenza kusebenze i-alkaline phosphatase yamathambo. Umzimba wethu unamandla okuwuguqula ube yi-calcium. I-Magnesium iyisihluthulelo sokumunca i-calcium.
tetany: ukwelashwa okuqondile kwe-tetany. Egazini lonke kulokhu kulokhu kwehla u-0,035 g we-magnesium ion yamahhala ngelitha ngalinye, kuya ku-0,015 g ngelitha ngalinye.
Ukungakwazi kahle kwe-hepatic: isebenza nama-enzyme okwenziwa kabusha koshukela.
sokukhulelwa: Kusukela enyangeni yesi-2, izinga le-magnesium ngokuvamile liwa kwabesifazane abakhulelwe, ngenxa yezidingo zombungu.
thrombosis: yenza kusebenze ama-thrombocyte. Kuyi-anti-coagulant engcono kakhulu ne-anti-thrombic engcono kakhulu. Kusemqoka ezinsukwini zokugcina ngaphambi kokubeletha nasemasontweni amabili alandelayo.
ibhalansi kwemizwa: isimiso sezinzwa sincike kubhalansi ye-calcium / magnesium. Uma kukhona ukuphazamiseka kokulinganisela, ukusebenza kobuchopho kuyathinteka.
Ukugaya: isebenza i-enzymes yokugaya.
amavithamini: uvithamini C usebenza kuphela lapho kukhona i-magnesium ion.
Isimo senhliziyo: i-magnesium ions isiza ekunciphiseni igazi nasekuthambiseni imikhumbi, yehlisa izinzwa, ivimbele ukwakheka kwama-atheroma. Kucindezela i-angina pectoris. Ilawula isigqi sokushaya kwenhliziyo, ivusa i-cholesterol enhle, inciphisa izinga le-triglycerides.
ukuguga: ngeminyaka, izinga le-magnesium egazini nasemaseleni livame ukwehla. IMagnesium ethathwa ngemithamo ejwayelekile inciphisa ukuguga kwamaseli (ngamanani avamile, thatha i-NIGARI esikhundleni salokho, bheka ngezansi) futhi igcina ama-radicals wamahhala kude.
izilonda: sonke isilonda kungukwephula okuyingozi okushiya indawo yokuhlasela kobuthi namagciwane. Umzimba uphendula ngokushesha ngokuhlanganisa amasosha omzimba esayithi, ama-leukocyte, ama-microphage ahlasela ama-microbes, ama-macrophage ahlasela izinto ezinkulu zangaphandle, kuyilapho ama-thrombocyte ezama ukuxhuma ukuvulwa. Amandla we-phagocytic wama-leukocyte, enziwe asebenza nge-magnesium chloride, enyuswa ngama-300%. Noma yisiphi isilonda kufanele silashwe ngaphakathi nangaphandle nge-magnesium chloride. Le ndlela ayinakho ukungalungi kwemikhiqizo yotshwala, okuyingxenye ethile ye-necrosis amaseli enxeba, ngaleyo ndlela kuvimbele umsebenzi wokupholisa.
Yenza imithi yokwelapha: phuza u-50 ml wesisombululo esiswini esingenalutho ekuseni, okungcono ngetiye eliyikhambi olithandayo noma isithelo noma ijusi yemifino. Ukwenziwa izinsuku ezingama-20 kulandelwe ukumiswa kwezinsuku eziyi-10 (kubalulekile) bese uqala futhi uma kunesidingo. Ngakho-ke sithatha ilitha elilodwa ezinsukwini ezingama-1. Lokhu kungenziwa inkathi eyodwa, noma lapho kwenzeka “ushintsho lwendlela”, lokukhulelwa, lokuncelisa ibele, kwanoma yisiphi isifo.
Ukwelashwa kwe-cytophylactic ephuthumayo (kusebenze izindlela zokuzivikela): thatha ama-60 ml wesisombululo njalo emahoreni ama-3 noma ama-40 ml njalo emahoreni ama-2. Lokhu kufanele kubangele isifo sohudo. Uhudo luyindlela yokuthola impumelelo nomphumela wokwelashwa. Uma kunemfiva, yehla ngokuzenzakalela phakathi kuka-38 ° no-39 °, kungabe kusaba njalo. Lokhu kudla akufanele kudlule izinsuku ezi-4 kuye kwezi-5. Ngemuva kwalokho singaqhubeka ngesilinganiso esingu-50 ml ekuseni nakusihlwa.
Uma isifo sohudo sinzima kakhulu ekuqaleni, yehlisa umthamo. Ungakhathazeki, ayikho ingozi.
Leli dose elikhulu elibhebhethekisayo livumelekile kuzo zonke izifo, ngisho nezifo eziphilayo.
Cancer: I-anticancer, isebenzisa amandla we-phagocytic we-leucocytes.
IMagnesium chloride ayilaphi umdlavuza, kepha iyayivimba ukuthi ingenzeki ngokusetshenziswa okuvamile. Kodwa-ke, uma kwenzeka unomdlavuza oqinisekisiwe, kunconywa ukufaka ukwenziwa okuvamile kwe-magnesium chloride noma i-delbiase ngesilinganiso samathebulethi ama-4 ngosuku, amasosha omzimba azoqiniswa futhi uzozizwa ungcono, uvuselelwe futhi uziphathe kahle. , Okungaba nethonya elihle kakhulu ekuqhubekeni kwalesi sifo (i-jelly yasebukhosini ethathwe ekuseni, futhi iphakamisa isimilo).
Kwenziwa izifundo ezinzulu zokuma kwezwe ngonyaka we-1928, amabalazwe okwakheka komhlaba ezifundeni lapho umhlaba wayempofu khona ku-magnesium kwaqondana nalezo zezifunda lapho kwakukhona inani elikhulu lomdlavuza. Ukuqhathaniswa kwamakhadi amabili kuyamangaza. Singabaphambanisa.
Ukuqhathaniswa: umuntu onezinso ezibuthakathaka (nge-nephrite isibonelo). Isignali ibonakala ngokukhathala okukhulu ngemuva kokubanjwa (kulokhu kuthatha i-NIGARI).
Ukusetshenziswa: ukulinganiselwa okuphezulu kwezingane:
Iminyaka engu-5 no +: 125 ml njalo amahora we-6 noma i-40 ml njalo ngamahora we-2.
Iminyaka engu-4 100 ml njalo amahora we-6.
Iminyaka engu-3 80 ml njalo amahora we-6.
Iminyaka engu-2 20 ml njalo amahora we-2.
Izinsana: kusuka ku-1 kuya ku-4 ithisipuni njalo ngamahora we-3.
Isixazululo esilungisiwe singahlanjululwa emanzini amancane noma ujusi wezithelo ukunciphisa ukunambitheka okumunyu.
I-Nigari: Ngokuphathelene nokwelashwa kwesondlo, kungakuhle ukuthi uthathe i-NIGARI esikhundleni, okuyi-algae enothe kakhulu ku-magnesium chloride ngendlela yayo yemvelo (ezitolo zokudla ezempilo). Ukwenza umzimba usetshenziselwe i-magnesium chloride (ethathwa olwandle kufana nosawoti) kuqeda ukusebenza kwawo, futhi uma kungazelelwe, umuntu adinga ukushintshela emithamo emikhulu yokulwa nokutheleleka, imiphumela kungahle kudumaze.
Ama-flakes ambalwa we-NIGARI ekudleni ngezikhathi ezithile aqinisekisa umthwalo owanele we-magnesian unyaka wonke.
ukusha: sebenzisa i-compress ye-magnesium chloride, izinhlungu ziyayeka ngokushesha, kufanele uhlale ulungele i-magnesium chloride ekhaya: 1 sachet noma 20g elitha lamanzi. Lapho ukugqoka kusendaweni, kungavuselelwa ngokuthela nge-magnesium chloride ngaphandle kokuhlehlisa ukugqoka. Ngeke kube khona ukutheleleka.
Izilwane: uhlu lwezifo lapho i-magnesium chloride isebenza ngempumelelo: isifo sonyawo nomlomo, ukwelashwa kokuvikela ukukhipha isisu, i-sepsis, ukwelashwa kokungavundiswa kwezinkomo, ukwelashwa kwesisu, i-bronchitis, i-enteritis, ukuqunjelwa (ukuqunjelwa), i-bronchopneumonia, i-distemper (inja), i-gastroenteritis, i-diphtheria yezinyoni, ikholera yezinyoni, isifo sezinyoni, isifo sezinyoni, inyumoniya esithathelwanayo ezinkukhu, isifo sohudo esimhlophe, i-coccidiosis yonogwaja njll.
I-Nigari - I-Magnesium chloride - iCelnat - 100g
Okusha okungu-7 kusuka ku- € 1,97
Thenga i- € 5,90
Kugcine ukubuyekezwa ngo-Septhemba 17, 2021 8: 24 am
I-HAARP, isikhali sokuqala sokulawula ukucabanga emhlabeni wonke?
Indaba emangalisa kakhulu yezigqila ezikhohliwe zikaTromelin ezikhulunyiwe emaphepheni amahlaya
Imibhalo engcwele kanye nemibhalo yezwe yaseGibhithe lasendulo